Ny kofehin'ny fiaramanidina dia antsoina koa hoe kofehy farany, ary ny endriny nify dia mitovy amin'ny kofehy mahitsizoro, fa ny kofehy fisaka dia matetika ilay kofehy voahodina amin'ny tarehy farany amin'ny varingarina na kapila. Ny làlan'ny fitaovana mihodina mifandraika amin'ny workpiece rehefa manamboatra kofehy fiaramanidina dia ...
Ny fitsipika miasa amin'ny famolavolana bobongolo sy ny fizotrany.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-10
Amin'ny dingam-pamokarana bobongolo, ny ampahany amin'ny bobongolo matetika dia mila nohosorana. Ny fifehezana ny haitao poloney dia afaka manatsara ny kalitao sy ny ain'ny serivisy amin'ny bobongolo ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra ny fitsipika miasa sy ny fizotrany ...
Crankshafts dia be mpampiasa amin'ny motera. Amin'izao fotoana izao, ny akora ho an'ny maotera fiara dia vy sy vy vy. Noho ny fahombiazan'ny fanapahana vy vy dia vita ny fitsaboana hafanana isan-karazany sy ny fanamafisana ny fanamafisana ny endrika fanatsarana ny tanjaka havizanana, ny hamafiny ary ...
Ny kiran'ny milina ao amin'ny ivon-toeran'ny milina dia iray amin'ireo fampiharana lehibe indrindra. Amin'ny dingan'ny fanodinana kofehy, ny kalitao sy ny fahombiazan'ny milina dia misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitao sy ny fahombiazan'ny ampahany. Ireto ambany ireto dia hampahafantarinay ireo fomba fanodinana kofehy izay matetika ampiasaina amin'ny ma ...
Ny fanodinana latina cnc dia mitoto ny toetra mampiavaka azy: 1. Fitotoana kodiarana mifandraika amin'ny workpiece ho an'ny fihodinan'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, matetika ny hafainganam-pandehan'ny kodia dia mahatratra 35m / s, manodidina ny 20 heny ny fitaovana mahazatra, ny masinina dia afaka mahazo tahan'ny fanesorana vy lehibe kokoa. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny ...
Fitsaboana anti-harafesina ataon'ny fasteners, mendrika ny angonina!
Ny fastener dia singa mahazatra indrindra amin'ny fitaovana mekanika, ary tena ilaina koa ny asany. Na izany aza, ny harafesin'ny fasteners mandritra ny fampiasana no tranga mahazatra indrindra. Mba hisorohana ny lozin'ny fasteners mandritra ny fampiasana, maro ny mpanamboatra no handray ny fitsaboana ambonin'ny tany aorian'ny ...
Ahoana ny fomba fanapahana vy mahery amin'ny famokarana mekanika?
Ny vy matanjaka dia ampiana amin'ny habetsaky ny singa mampifangaro vy. Aorian'ny fitsaboana hafanana dia manamafy ny vahaolana mivaingana ny singa manaparitaka, ary ny firafitry ny metallographic dia martensite amin'ny ankapobeny. Manana tanjaka lehibe sy hasiam-batana avo lenta izy, ary ny hamafin'ny fiantraikany dia avo kokoa noho izany koa ...
Ahoana ny fanatsarana ny famokarana milina?
Ny famokarana mpiasa dia milaza ny habetsaky ny fotoana namokaran'ny mpiasa vokatra mahafeno fepetra isaky ny ora iray na ny fotoana ilana azy amin'ny famokarana vokatra tokana. Ny fitomboan'ny vokatra dia olana feno. Ohatra, ny fanatsarana ny famolavolana ny firafitry ny vokatra, ny fanatsarana ny kalitaon'ny maherifo ...
Ahoana no fomba hahatongavanao ho tompon'ny fandaharana momba ny milina CNC
Ho an'ireo izay mirotsaka amin'ny milina, ny fanatsarana ny fahaizan'izy ireo miasa dia zava-dehibe ny hianarana fandaharana milina CNC. Raha te ho lasa master CNC (kilasy fanapahana vy) dia maharitra 6 taona farafahakeliny aorian'ny famoahana ny oniversite. Tokony hanana ny ambaratonga teorika amin'ny injeniera izy ...
Inona avy ireo fomba hisorohana ny famotsoran-keloka mandritra ny milina?
Amin'ny maha fastener azy dia ampiasaina amin'ny fitaovana elektrika sy milina elektrika ary indostria hafa ny bolts. Ny bolt dia misy ampahany roa: ny loha sy ny visy. Mila miara-miasa amin'ny voanjo izy hanamafisana ny faritra roa amin'ny alàlan'ny lavaka. Ny bolt dia tsy azo esorina, fa hovahana izy ireo raha ...
Ahoana ny fanamorana ny fizotry ny fitantanana ireo zavamaniry fanodinana mekanika?
Na orinasa vondrona lehibe na orinasa fanodinana mekanika kely dia ilaina ny mitantana tsara raha te hiasa sy hahazo tombony ianao. Amin'ny fitantanana isan'andro, misy lafiny dimy indrindra: fitantanana ny drafitra, fitantanana ny fizotrany, fitantanana fikambanana, fitantanana stratejika ...
Ahoana ny fomba hampihenana ny fiovana amin'ny fizotran'ny fanapahana tariby CNC?
Noho ny kalitaon'ny vokatra avo sy avo lenta, ny milina CNC dia be mpampiasa eo amin'ny sehatry ny milina. Ny fizotran'ny fanapahana tariby CNC, ny fizotrany farany amin'ireo sanganasa voahodina indrindra, dia matetika no sarotra ny mamorona rehefa simba ilay sangan'asa. Noho izany dia ilaina ny mandray fepetra mifanaraka amin'izany ...